समाजवाद र क्युवाली मानव - क. चे ग्वेभारा Left Review Online
क्युवाली क्रान्तिकारीको कलमबाट
क्युवाको क्रान्तिको इतिहासमा स्पष्ट रुपले परिभाषित नख–शिख र रुपरेखासहित एउटा नयाँ बहुमुखी चरित्रको उदय भयो, त्यो चरित्र हो; जनता ! हो, जनता त इतिहासको मंचमा सुव्यवस्थित रुपले बारम्बार उदाइरहने छन् ।
हुन त टिप्पणी लेख्न अलि ढिलो भइसकेको छ, तापनि आफ्नो वाचा पूरा गर्ने आशासहित मैले अफ्रिकाको यात्राको क्रममा यी टिप्पणीहरु लेखिरहेको छु । माथि उल्लेखित शीर्षकअनुरुप टिप्पणीहरु लेख्ने प्रयत्न गर्नेछु । मलाई आशा छ – पाठकहरुका लागि यो रुचीकर हुनेछ ।
हामी समाजवादको निर्माणमा उद्यत छौं । समाजवादका विरुद्ध पुँजीवादी प्रवक्ताहरु पनि विचारधारात्मक संघर्षमा लीन छन् । यस्तो संघर्षको क्रममा उनीहरु धेरैजसो के तर्क दिन्छन् भने समाजवादमा वा समाजवादको निर्माणकालमा राज्यको हितका लागि व्यक्तिलाई बली दिइन्छ । म केवल सिद्धान्तको आधारमा मात्रै यस तर्कको प्रतिवाद गर्दिनँ, बरु यसको प्रतिवादमा क्युवाली अनुभवका तथ्यहरुसमेत प्रस्तुत गर्नेछु र सामान्य स्वभावको टिप्पणी अगाडि सार्नेछु ।
हामी सबैलाई थाहा छ – क्रान्तिकारी संघर्षको सुरुआत २६ जुलाई, १९५३ मा भएको थियो, जुन संघर्ष पहिलो जनवरी १९५९ मा समाप्त भएको थियो । २६ जुलाईको दिन बिहान सबेरै ओरियन्ट प्रान्तको मोन्काडा छाउनीमाथि फिडेल क्यास्ट्रोको नेतृत्वमा रहेको एउटा समूहले आक्रमण गरेको थियो । त्यो आक्रमण असफल भएको थियो । यो असफलताले ठूलो बिपत्ति ल्यायो । जीवित रहनु भएका मानिसहरुलाई बन्दी बनाइयो । मुक्त भएपछि उहाँहरुले फेरि सुरुदेखि क्रान्तिकारी संघर्षको सूत्रपात गर्नुभयो ।
यही प्रक्रियाको क्रममा, व्यक्ति नै आधारभूत तत्वको रुपमा रहेको थियो, जुन प्रक्रियामा समाजवादको बिउमात्रै रहेको थियो । व्यक्तिकै रुपमा देखापर्नु भएका यही विशिष्ट र एक्लो खास मानिस नै हाम्रो विश्वसनीय मनुष्य बन्नुभयो । र, उहाँलाई सुम्पिएको जिम्मेवारीको सफलता वा असफलता उहाँकै कार्य–क्षमतामाथि निर्भर थियो ।
त्यसपछि छापामार युद्धको चरण आयो । यस युद्धलाई दुई भिन्नाभिन्नै वातावरणअन्तर्गत विकसित गरियो । ती दुई भिन्नाभिन्नै वातावरणमा एकातिर जनता थिए, अर्कोतिर छापामारहरु । त्यसबेलासम्म जनता अचेतन भीडको रुपमा थियो, जसलाई एकजुट पारी परिचालन गर्नु जरुरी थियो । अर्कोतिर छापामारहरु क्रियाशील थिए : जनताका अगुवाका रुपमा, जनपरिचालनको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने इन्जिनको रुपमा, क्रान्तिकारी चेतना र जुझारु उत्साहका जनकका रुपमा ! विजयका लागि आवश्यक आत्मगत स्थितिको सिर्जना गर्ने उत्प्रेरक शक्ति पनि यही अगुवा दस्ता थियो ।
म यहाँ फेरि पनि जोड दिएर भन्छु, हाम्रो विचार–शक्तिलाई सुस्तरी–सुस्तरी सर्वहाराकृत रुप दिने कार्यमा, हाम्रा बानी–व्यहोराहरु र हाम्रा मन–मस्तिष्कहरुमा भइरहेको क्रान्तिमा यही व्यक्ति नै आधारभूत तत्त्वको रुपमा रहेको थियो ।
सन् १९५९ मा क्रान्तिकारी सरकारको स्थापना भयो, त्यसमा गद्दार पुँजीपति वर्गका अनेक प्रतिनिधिहरु पनि सहभागी भए । शक्तिको आधारभूत तत्त्वको रुपमा रहेको विद्रोही सेनाको उपस्थितिले क्रान्तिकारी सत्ताको दिगोपनाको प्रत्याभूति दिएको थियो ।
पछि गएर गम्भीर अन्तरविरोधहरु विकसित भए । ती अन्तरविरोधहरुको हल गर्ने प्रक्रिया सर्वप्रथम तब सुरु गरियो, जब ७ फेब्रुअरी, १९५९ मा फिडेल क्यास्ट्रोले प्रधानमन्त्रीको पद ग्रहण गरी सरकारको नेतृत्व सम्हाल्नुभयो । यस प्रक्रियाको अन्त्य तब भयो, जब त्यसै वर्षको जुलाई महिनामा जनताको ठूलो दवाबबश राष्ट्रपति उरुतियाले राजीनामा दिनु भयो ।
के दाबी गरिन्छ भने यो बहुमुखी चरित्र भएको जनता भनेको समान श्रेणीका तत्वहरुको कुलजोडमात्रै हो, यिनीहरुले पाल्तु भेडा–बाख्राहरुले जस्तै व्यवहार गर्छन् । तर यथार्थ के होभने जनता भनेका समान श्रेणीका तत्वहरु होइनन्, न त भेडा–बाख्राहरु नै हुन् । बरु उनीहरुमाथि प्रभुत्व जमाइरहेको राज्य–व्यवस्थाले उनीहरुलाई एउटै श्रेणीमा भेडा–बाख्रालाई जस्तै कोचेर राखेको कारणले मात्र त्यसो देखिएको हो ।
के कुरा सत्य होभने जनताले विना कुनै दुविधा आफ्ना नेताहरुको अनुसरण गरेका छन्, विशेष गरी फिडेल क्यास्ट्रोको ! तर जुन विशाल परिमाणमा उहाँले यसरी जनविश्वास आर्जन गर्नु भएको छ, त्यो निश्चित रुपमा जनताका इच्छा र आकांक्षाहरुको सही अभिव्यक्तिको कारणले संभव भएको हो, बाहिर घोषित बाचाहरु पूरा गर्नका लागि उहाँले गर्नु भएको इमान्दारीपूर्ण संघर्षको कारणले त्यसरी जनविश्वास प्राप्त गर्न सफल हुनु भएको हो ।
जनताले कृषि सुधारको अभियानका कामहरुदेखि लिएर राज्यका प्रतिष्ठानहरुको प्रबन्धसम्बन्धी कठिन जिम्मेवारीहरुमा समेत भाग लिए । उनीहरु प्लाया गिरोनका वीरतापूर्ण अनुभवहरुबाट अगाडि बढे, उनीहरु सी.आई.ए.द्वारा सशस्त्र पारिएका डाँका डफ्फाको विरुद्ध चलाइएको संघर्षमा इस्पातजस्तै मजबुत बने; अक्टोबर संकटको बेलामा उनीहरु आधुनिक युगका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण परिभाषाअनुरुप बाँचे, अनि आज उनीहरु समाजवादको निर्माणको कामलाई निरन्तर रुपमा अगाडि बढाउन ब्यस्त छन् ।
वस्तुलाई सतही ढंगले हेर्ने दृष्टिकोणबाट हेर्दा मनमा लाग्नसक्छ : व्यक्तिलाई राज्यको अधीन मान्ने मानिसहरु नै सही हुन् कि के हो ! हो, निश्चित रुपमा जनताले अतुलनीय उत्साह र अनुशासनका साथ सरकारद्वारा निर्धारित कामहरुलाई पूरा गरेका छन्, ती कामहरुका स्वरुपहरु चाहे जस्तोसुकै किन नओऊन्, चाहे ती कामहरु आर्थिक, सांस्कृतिक, सुरक्षात्मक र खेलकूदसम्बन्धी नै किन नओऊ्न् ! हो, निश्चित रुपमा यस्ता कामहरुको पहलकदमी साधारणतया फिडेल कयास्ट्रोबाट वा क्रान्तिको उच्च कमाण्डबाटै शुरु हुन्छ र ती कामहरुको बारेमा जनतालाई ब्याख्या गरेर बुझाइन्छ, अनि त्यसपछि जनताले त्यसलाई आफ्नै बोधको रुपमा लिन्छन् । अक्सर गरेर पार्टी र सरकारद्वारा विशिष्ट स्थानीय अनुभवहरुलाई लिइन्छन् र त्यही प्रक्रियाद्वारा ती अनुभवहरुको आधारमा बनेको धारणालाई आमरुप दिने र कार्यरुप दिने काम गरिन्छन् ।
त्यसो हुँदाहुँदै पनि राज्यबाट कहिलेकाहीँ गल्तीहरु हुन जान्छन् । जब त्यस्ता गल्तीहरु हुन्छन्, तब जनताबीच विद्यमान प्रत्येक तत्वहरुमा गुणात्मक कमी आउँछ । त्यसैको परिणामस्वरुप सामूहिक उत्साह ओह्रालो लाग्छ; र कामहरु ठप्प हुन थाल्छन् अनि अन्ततः महत्त्वहीन सीमासम्म ती कामहरु संकुचित हुन थाल्छन् । हो, गल्तीहरु सुधार्ने समय भनेको यही नै बेला हो । अनीबाल एसकालान्तेद्वारा पार्टीमाथि थोपरिएको संकीर्णतावादी नीतिको परिणामस्वरुप सन् १९६२ को मार्च महिनामा यस्तै गल्ती हुन गएको थियो ।
पुँजीवादअन्तर्गत व्यक्तिको जीवन एउटा त्यस्तो निर्मम र कठोर विधानले बाँधिएको हुन्छ, जुन सामान्यतया व्यक्तिको बोध–क्षमताभन्दा अलि टाढै हुन्छ । घना एक्लोपनाको भारी बोक्दै त्यो व्यक्ति समग्ररुपमा एउटा त्यस्तो अदृश्य धागोद्वारा समाजसँग बाँधिएको हुन्छ; जसलाई मूल्यको विधान भनिन्छ । यही अदृश्य मूल्य–विधानले व्यक्तिको जीवनका सबै पक्षहरुमाथि प्रभाव पार्छ, त्यसैले उसको जीवनको बाटो तय गर्छ र उसको भाग्यको निर्माण गर्छ ।
पुँजीवादका विधानहरु अन्धा हुन्छन् र अधिकांश मानिसहरुका लागि अदृश्य हुन्छन् । तर तिनै विधानहरु व्यक्तिको मन–मस्तिष्कभित्र पसेर, त्यस विषयसम्बन्धी उसको चेतनाविनानै क्रियाशील रहन्छन् । व्यक्तिले त पुँजीवादी क्षितिजको विशालता मात्रै देख्न पाउँछ, जुन हेर्दाखेरी अनन्तजस्तो देखिन्छ । पुँजीवादी प्रचार माध्यमहरुले बिलकुल यसरी नै सफलताको कथा प्रस्तुत गर्छन्; सफलताका संभावनाहरुलाई व्यक्त गर्नका लागि तिनीहरुले रकफेलरको कथालाई सिक्नुपर्ने पाठको रुपमा प्रयोग गर्छन्, चाहे त्यो सफलता झूठो होस् कि साँचो ! एक रकफेलरको कथा सिर्जना हुन कति अभावहरु, कति गरीवीहरु र कति पीडाहरुको संचयको आवश्यकता भएको थियो भन्ने कुरा त्यस सफलताको प्रस्तुतिमा छोएको पनि हुँदैन । एक रकफेलरको अपार धन–सम्पत्तिको निर्माणका लागि कति धेरै नीचता र उत्पीडनहरुको विशाल संचयको जरुरी भयो भन्ने वास्तविकता पनि त्यस सफलताको कथाबाट गायब गरिएको हुन्छ । र, जनताबीच क्रियाशील शक्तिहरुसँग यस्ता झूठा कथा र धारणाहरुलाई चिरेर वास्तविकता प्रष्ट्याउन सक्ने क्षमता सधैं हुन्छ भन्ने कुरा पनि भएन नि !
(यसै सन्दर्भमा यहाँ दुई तीनवटा पक्षहरुलाई अध्ययनको विषय बनाउनु जरुरी हुनसक्छ, जस्तो : पराधीन देशहरुका जनतामाथिको शोषणप्रति अलिकति सम्मति हुने भएकाले साम्राज्यवादी देशहरुका मजदुरहरुले कसरी अन्तर्राष्ट्रिय वर्गीय भावना विस्तारै–विस्तारै त्यागिरहेका छन् ? कसरी आफ्नै राष्ट्रिय पृष्ठभूमिमा ती देशका जनताको जुझारु भावना थाक्दै थाक्दै गइरहेको छ ? – तर यी विषयहरु वर्तमान टिप्पणीको सीमाभन्दा बाहिर भएकाले यसलाई यहीँ रोक्छु ।)
पुँजीवादमा जुनसुकै मामिलामा पनि हामीले सफलताको लक्ष्यसँग जोडिएको एउटा अवरुद्ध बाटो देख्छौं । त्यो बाटो लक्ष्यसम्म पुग्न सफल हुनका लागि आवश्यक पृष्ठभूमि, ल्याकत र गुणहरुले सम्पन्न व्यक्तिले मात्र हिँड्न सक्छ । त्यसमा इनामको झलक निकै टाढा–टाढा मात्रै देखिन्छ र बाटो एकलास र निर्जन देखिन्छ । त्यसमाथि यो बाटोमा अगाडि बढ्नु भनेको ब्वाँसोको दौडजस्तै हो, केवल अरुको असफलताको बलमा मात्रै आफू कुनै लक्ष्यसम्म पुग्न सकिने दौडजस्तै हो यो !
नयाँ समाजको निर्माणको प्रक्रियामा त्यस नयाँ समाजले अतीतसँग निकै ठूलो र कठिन प्रतियोगिता गर्नुपर्ने हुन्छ । यो प्रतियोगिता वैयक्तिक चेतनामा परिलक्षित हुन्छ, जुन चेतना भनेको व्यक्तिलाई एकलकाँटे बनाउने दिशातिर केन्द्रित शिक्षा र लालनपालनको पद्धतिद्वारा घेरिएको हुन्छ । यसका साथै यो प्रतियोगिता वणिक सम्बन्ध यथावत रहिरहने कारणले संक्रमणकालको स्वरुपअनुरुप पनि स्पष्ट रुपमा देखा पर्दछ । माल (commodity) भनेको पुँजीवादी समाजको आर्थिक इकाई हो । जबसम्म मालको अस्तित्व कायम रहिरहन्छ, तबसम्म त्यसको असर उत्पादनका संगठनहरुमा परिरहन्छ, अतः व्यक्तिको चेतनामा पनि त्यसको प्रभाव देखा परिरहन्छ नै ।
मार्क्सले खिच्नुभएको रुपरेखाअनुसार संक्रमणकाल भनेको त्यस्तो विस्फोटक परिवर्तनको नतिजा हो, जुन विस्फोटक परिवर्तन आफूभित्रै रहेका अन्तरविरोधहरुको कारणले पुँजीवादी व्यवस्था विघटित हुँदा पैदा हुन्छ । ऐतिहासिक वास्तविकताले के देखाइरहेको छ भने कमजोर हाँगाको रुपमा रहेका केही देशहरुले विशाल साम्राज्यवादी रुखबाट आफूलाई अलग्ग पार्छन् । लेनिनले पहिले नै यसरी अलग्याउने प्रक्रियाको अनुमान लगाई सक्नुभएको थियो ।
ती देशहरुमा पुँजीवाद निकै धेरै विकसित भइसकेको छ, तिनीहरुले कुनै न कुनै रुपमा जनतामाथि आफ्नो प्रभाव देखाइरहन्छन् । आफ्ना सम्पूर्ण संभावनाहरुको मूल्य चुकाएर भएपनि तिनीहरुले आफ्ना पूँजीवादका अन्तरविरोधहरुको फलस्वरुप व्यवस्थालाई बिस्फोटनबाट बचाउँछन् ।
ती देशहरुमा सामाजिक श्रमका लागि अहिले पनि सम्पूर्ण शिक्षाको व्यवस्था गरिएको छैन । फेरि, बजेट विनियोजन गर्ने जस्तो सामान्य प्रक्रियाको फलस्वरुप जनता धनी हुने त कुरै भएन । ती देशहरुमा एकातिर पछौटेपना छ भने अर्कोतिर ती देशको पुँजी ठूला पूँजीवादी देशहरुतिर पलायन भइरहेको छ । यस्तो स्थितिमा बलिदानविना दु्रतगतिमा आमूल परिवर्तन संभव नै हुँदैन । आर्थिक आधारको निर्माणका लागि अहिले पनि एउटा लामो बाटो हिँड्न बाँकी छ र द्रुत विकासको कुञ्जीको रुपमा रहेको मानिने भौतिक हितको थोत्रो पुरानो बाटोमै हिँड्ने मोह पनि धेरैमा अति अधिक छ ।
रुख हेर्दा जंगल नदेख्ने संभावना रहेजस्तै, तात्कालीन काममा मात्रै ध्यान केन्द्रित गर्दा सम्पूर्ण परिस्थितिको स्पष्ट बोध नहुने खतरा छ । माल उत्पादनजस्तो पुँजीवादको आर्थिक इकाईलाई यथावत् राखीछाड्नु, उत्प्रेरणाका लागि नाफा र व्यक्तिगत भौतिक हितहरुको प्रयोग गरिराख्नु भनेको पुँजीवादी उपायहरु नै हुन् । पुँजीवादी व्यवस्थाको विरासतको रुपमा पाइने यस्ता भुत्ते र हानिकारक हतियारहरु प्रयोग गरेर समाजवादको सुन्दर सपना साकार पार्न दौडिँदा अँध्यारो अन्धो गल्लीमा पुग्ने कुरा सुनिश्चित छ । यस्तो अँध्यारो अन्धो गल्लीमा अनेकौं दोबाटा र चौबाटाहरु नाघ्दै एउटा लामो बाटो दौडिसकेपछि ‘हामीले कहिले गलत मोडमा पाईला टेक्यौं’ भन्ने कुरा ठम्याउन नै गाह्रो हुन्छ । र, यसैबीच जुन पुँजीवादी आर्थिक आधारलाई समाजवादी बाटोको रुपमा अपनाइएको हुन्छ, त्यसले चेतनाको विकासलाई पनि विखण्डित पारिसकेको हुन्छ । त्यसैले साम्यवादको निर्माणका लागि नयाँ भौतिक आधारको निर्माणका साथसाथै नवमानवको सिर्जना गर्नु जरुरी छ ।
त्यसैले जनतालाई परिचालन गर्नका लागि सही माध्यम, सही प्रक्रिया र ठीक उपायको छनौट अति महत्त्वपूर्ण हुन्छ । भौतिक प्रोत्साहनको सही उपयोगलाई नबिर्सिकन, विशेषगरी सामाजिक प्रकृतिको भौतिक प्रोत्साहनको सही उपयोगलाई नबिर्सिकन भन्ने हो भन्ने होभने स्पष्ट शब्दमा भन्न सकिन्छ, त्यो सही माध्यम भनेको आधारभूत रुपमा नैतिक उत्प्रेरणा मात्रै हुनसक्छ !
जस्तो कि मैले पहिले पनि भनिसकेको छु : अति जोखिमका क्षणहरुमा नैतिक उत्पे्ररणालाई सक्रिय गर्न सजिलो हुन्छ । तर यसको प्रभावकारितालाई सँधै बचाई राख्नका लागि त्यस्तो चेतनाको विकास गर्नु आवश्यक छ, जसमा नैतिक मूल्यहरु नयाँ आर्थिक आधारमाथि फल्ने–फुल्ने प्रक्रिया होस् ! हो, यसको लागि सिंगो समाजलाई नै एउटा विराट स्कूलको रुपमा फेर्नु पर्छ ।
यसको लागि आवश्यक प्रक्रियाको मोटामोटी विशिष्टता भनेको पुँजीवादी व्यवस्थाको निर्माणको पहिलो चरणको क्रममा पुँजीवादी चेतनाको निर्माण प्रक्रियाजस्तै हो । त्यसबेला पुँजीवादले शक्ति प्रयोग गर्छ, यसका साथसाथै जनमानसलाई व्यवस्थाअनुकूल शिक्षित पनि गर्छ । पुँजीवादका प्रचारकहरुले प्रत्यक्ष रुपमा प्रचारबाजी पनि गर्छन् । यो उनीहरुकै जिम्मामा हुन्छ– जनमानसलाई वर्गीय समाजका अनिवार्यताहरुको बारेमा संझाउने–बुझाउने कर्तव्य । यसका लागि प्राकृतिक नियमसम्बन्धी यान्त्रिक सिद्धान्त वा दैवीय उत्पत्तिको सिद्धान्तको प्रचार गर्नु परे पनि गर्ने उपाय अपनाइन्छ । यसै प्रकारको प्रभावस्वरुप जनमानस पुँजीवादी व्यवस्थाअनुकूल ढालिन्छ र जनताले बुझ्न थाल्छन् : हामीले त्यस्तो दैवी र प्राकृतिक प्रकोपको उत्पीडन सहनुपर्छ, जोसँग संघर्ष गरेर पार लगाउन सकिन्न !
त्यसपछि आउँछ; यहीँ र अहिले नै उन्नति गर्न पाउने सुनौलो आशा, पहिलेका गतिहीन वर्गीय व्यवस्थाहरुभन्दा पुँजीवादी व्यवस्थामा उन्नतिको आशा अत्याधिक छ भन्ने भरोसा ! अरु वर्गीय व्यवस्थाहरुभन्दा पुँजीवादी व्यवस्थालाई भिन्न पार्ने मुख्य तत्व नै यही उन्नतिको आशा र भरोसा त हो !
तर यो प्रक्रिया जागरुक खालको हुन्छ । व्यक्ति नयाँ सामाजिक शक्तिबाट निरन्तर रुपमा प्रभावित हुन्छ अनि उसले महसूस गर्छ – नयाँ सामाजिक शक्तिको मापदण्डअनुरुप आफूलाई चाहिँ फेर्न सकेको रहेनछु ! अप्रत्यक्ष शिक्षाको दवाबको परिणामस्वरुप व्यक्तिले एउटा त्यस्तो परिस्थितिसँग आफूलाई अनुकूल पार्ने प्रयास गर्छ, जुन परिस्थितिलाई ऊ न्यायोचित ठान्छ, जसको विकासको अभावमा उसले आफूलाई शिक्षित गर्न नसकेको महशुस गर्छ । हो, यसरी नै उसले शिक्षित गरिरहेको हुन्छ ।
के कुरा स्पष्ट छ भने, अहिले स्वैच्छिक श्रमको स्थिति हुँदाहुँदै पनि श्रमका बाध्यात्मक पक्षहरु छन् । र, अहिले पनि मानिसले आफूलाई चारैतिरबाट घेरिरहेका बाध्यात्मक पक्षहरुलाई सामाजिक चरित्रको रुपमा फेर्न सकेको छैन । अहिले पनि अनेक स्थितिमा उसले वातावरणका दवाबहरुअन्तर्गत श्रम गर्दछ, जसलाई फिडेल क्यास्ट्रो नैतिक दवाब भन्नुहुन्छ । सामाजिक वातावरणको कुनै पनि प्रत्यक्ष दवाबविना, तर नयाँ आनीबानीको सिर्जनासँग जोड्दैजोड्दै, श्रमरत् मानिसले आफ्नो श्रमको बारेमा धारणा फेर्दै–फेर्दै सम्पूर्ण मानसिक पुनर्जन्मको स्थितिसम्म पुग्नुपर्छ । श्रमको सम्पर्कमा हुने यो मानसिक परिवर्तन नै साम्यवाद (communism) हो !
मैले पहिले पनि संकेत गरिसकेको छु, हामीले त्यस्तो अतिशुद्ध संक्रमणकालको अवधिसँग व्यवहार गरिरहेका छैनौं, जुन संक्रमणकालीन अवधिबारे मार्क्सले आफ्नो कृति ‘गोथा कार्यक्रमको आलोचना’ (Critique of the Gotha Programme) मा परिकल्पना गर्नुभएको थियो । हामीहरु त त्यस्तो नयाँ अवधिमा छौं, जुन अवधिका बारेमा उहाँले पूर्व–कल्पनासमेत गर्नुभएको थिएन । हो, त्यो नयाँ अवधि भनेको साम्यवादतिर संक्रमणको प्रथमकाल वा समाजवादको निर्माणको समय हो ! हिंसात्मक वर्ग–संघर्षको मध्यान्हको चर्को घामबीच अगाडि बढिरहेको यो समय र यो प्रक्रियाअन्तर्गत पूँजीवादका तत्वहरु पनि क्रियाशील छन् । ती पूँजीवादी तत्वहरुको परिवर्तनको प्रक्रियासम्बन्धी पूर्ण ज्ञान अहिले पनि अस्पष्टताको कुइरोबीच हराइरहेको छ ।
यो प्रक्रिया आफै पनि उसको पलायनको प्रयास हो । मूल्यको सिद्धान्त अब केवल उत्पादन सम्बन्धहरुको प्रतिविम्ब मात्रै होइन । एकाधिकारी पूँजीपतिहरुले मूल्यको सिद्धान्तलाई अत्यन्त जटिल खालको जालले घेरेर आफ्नो क्रीतदास बनाइसकेको छ, यसको लागि प्रयोग गरिएको प्रयास केवल व्यवहारवादी नै किन नहोस् । ऊपरी ढाँचा (Superstructure ले त्यस्तो खालको कलाको माग गर्छ, जसमा कलाकारहरु अनुकूलित हुन्छन् । विद्रोहीहरुलाई व्यवस्थाका यन्त्रहरुले पराजित गरिसकेको हुन्छ र केवल अद्वितीय प्रज्ञावान् व्यक्तिले मात्रै आफ्ना कृतिहरुको सिर्जना गर्नसक्ने स्थिति हुन्छ । बाँकी अरु सबै व्यक्तिहरु निर्लज्ज भाडाका नोकर–चाकर भएर रहन्छन् या निर्मम कुल्चाइमा पर्छन् ।
हाम्रा कामहरुको उद्देश्य भनेको यही शिक्षालाई हरदम व्यवस्थित गरिरहनु हो । यसका लागि पार्टी जीवित उदाहरण बन्नुपर्छ । पार्टीका कार्यकर्ताहरु कठिन श्रम र बलिदानको नमूना बन्नुपर्छ । आफ्नो कर्मद्वारा उनीहरुले जनतालाई क्रान्तिकारी उद्देश्य र कर्तव्यतिर अगाडि बढाउने अभियानको अगुवाइ गर्नुपर्छ । यसको अर्थ हो : निर्माणका कामहरुका कठिनाइहरुका विरुद्ध, वर्ग शत्रुहरुका विरुद्ध, विगतका कमी–कमजोरी र गल्तीहरुका विरुद्ध, साम्राज्यवादका विरुद्ध वर्षौं वर्षसम्म संघर्ष …
(राजेन्द्र महर्जनको लेखन, अनुवाद र सम्पादनमा प्रकाशित ‘समाजवादको सपना’पुस्तकबाट साभार गरिएको प्रस्तुत ऐतिहासिक लेख चे ग्वेभाराले कार्लोस क्वीजानोलाई पत्रको रुपमा लेख्नुभएको थियो । कार्लोस ल्याटिन अमेरिकी देश उरुग्वेको राजधानी मोन्टेभिडिओबाट प्रकाशित हुने वामपन्थी साप्ताहिक पत्रिका Marcha का सम्पादक हुन्थिथ्यो । यो लेख उहाँले संयुक्त राष्ट्र संघलाई सम्बोधन गरेपछि भएको उहाँको अफ्रिकी राष्ट्रहरुको ३ महिने भ्रमणको क्रममा लेख्नुभएको थियो । यो लेख Marcha को मार्च १२, १९६५ अंकमा र Varde Olivo पत्रिकामा अप्रिल ११, १९६५ मा Socialism and Man in Cuba शीर्षकमा प्रकाशित भएको थियो ।)